Saynisyahannadu waxay ka walwalayaan suurtagalnimada infekshanka 'COVID-19' ee loo yaqaan 'chimpanzees'
Bogga ugu weyn » Wararka Booqashada Caalamiga ah » Wararka Safarka iyo Dalxiiska Tansaaniya » Saynisyahannadu waxay ka walwalayaan suurtagalnimada infekshanka 'COVID-19' ee loo yaqaan 'chimpanzees'
Cudurka suuragalka ah ee 'COVID-19' ee loo yaqaan 'chimpanzees'
Saynisyahannada ilaalinaya duurjoogta Afrika waxay ka walwalsan yihiin infekshan suurtagal ah iyo inuu ku faafo COVID-19 ilaa Chimpanzees iyo xayawaanka kale ee duurjoogta la xiriira.
Khubarada daryeelka ayaa cilmi baaris ku sheegay in fayrasyada dadka saameeya ay si fudud ugu boodaan inay saameeyaan Chimpanzees iyo noocyada kale.
Aagga Bariga iyo Bartamaha Afrika waa cilmi-baareyaasha ugu badan ee aqoonsaday inay soo saaraan tiro aad u tiro badan oo ah Chimpanzees, gorillas, iyo noocyo kale oo caan ah oo u nugul fayraska dadka ku dhaca.
Waxay sheegeen in dadka ku nool chimpanzee ay khatar ugu jiraan inay qaadaan noocyo cusub oo cudurro faafa oo dadku caan ku yihiin.
Agaasimaha Horumarinta Cilmibaarista iyo Isuduwidda ee Machadka Cilmi baarista Duurjoogta Tansaaniya (TAWIRI) Dr. Julius Keyyu ayaa laga soo xigtay maalinle maxalli ah oo Tansaaniya ka tirsan isagoo leh cudurrada faafa ee aadanaha sida coronavirus ayaa ku dhici kara astaamaha.
Baaraha sare ee cilmi baarista duurjoogta ayaa sheegay in khubaradu ay soosaarayaan hab maamuus cilmi baaris gudaha ah oo lagula soconayo caafimaadka chimpanzees si loo xakameeyo infekshannada la is qaadsiin karo sida coronavirus maadaama ay qaadsiin karto astaamaha haddii ay xiriir dhow la leeyihiin dadka qaba cudurka.
Wuxuu yidhi Qorshaha Waxqabadka Ilaalinta Chimpanzee ee Tansaaniya ee 2018 ilaa 2023 ayaa la bilaabay si wax looga qabto khataraha soo food saaray dadka ku nool dalka Chimpanzee ee ku nool Tansaaniya.
Khubarada duurjoogta ayaa intaa sii raaciyay in Chimpanzees-ka la ogaaday inuu la xanuunsanayo cudurada aadanaha sida oof wareenka iyo infekshannada kale ee neef mareenka ku dhaca, taasoo khatar weyn ku ah caafimaadkooda ka dib isdhexgalka ay la yeeshaan aadanaha.
Khubaradu waxay soo bandhigeen walaacooda ku saabsan halista caafimaad ee Chimpanzees iyo xayawaannada kale ee la xiriira bani'aadamka intii lagu jiray cudurka coronavirus, iyagoo ka baqay saamaynta dalxiiska iyo ilaalinta Afrika.